Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Manao veloma ny COVID-19 i Hawaii
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • WTN
Hawaii Tourism dia mamela fivoriana, fivoriambe, fampakaram-bady hiverina any amin'ny Aloha Fanjakana - am-pahatokiana
Miaraka amin'ny governemantan'i Hawaii Ige nanambara ny fanafoanana ny ankamaroan'ny fameperana maika amin'ny volana Desambra, dia hijanona ny saron-tava mpandala ny nentin-drazana sy ny fitsipika azo antoka.
Ny indostrian'ny fihaonana anefa dia avela hisokatra indray.
Ny fanapahan-kevitra momba ny fameperana dia hifindra avy amin'ny Fanjakana mankany amin'ny distrikan'ny Nosy.
Taorian'ny fironana nasionaly tany Etazonia, ny Aloha Ny fanjakan'i Hawaii koa dia nanambara ny COVID-19 ho tsy loza mitatao intsony.
Tsy maintsy mitohy sy mivelatra ny fizahantany. Ity fironana voalohany amin'ny raharaham-barotra ity dia vaovao miarahaba, indrindra ho an'ny indostrian'ny MICE any Etazonia, toy ny trano fandraisam-bahiny misy toeram-pivoriana, ny foibe fivoriambe, ary ny toeram-pivoriana.
Na dia vaovao tsara ho an'ny fizahan-tany aza izany, ny sasany dia manahy fa mety hihemotra izany amin'ny farany, na dia eo aza ny fanambaran'ny manampahefana, ny fitsipika fanokafana toy izany dia mbola hijanona. Manantena ny Fanjakana fa hiverenan’ny fahatokisana ny sehatra io toky io.
Hawaii dia milaza fa manana olona voarakitra an-tsoratra be dia be ny isan'ny olona vita vaksiny raha tsy mijery fa maro ireo nanao vaksiny ao amin'ny Fanjakana monina any an-kafa (an-trano na any ivelany) no nahazo ny tifitra azy tany Hawaii ary isaina ho isan'ireo mponina Hawaii 1.4 tapitrisa izao - inona no tsy marina .
eTurboNews nametraka io fanontaniana io im-betsaka, ary ny valiny mazava dia nosoritan'ny Governemanta sy ny ben'ny tanàna ary ny HTA.
Na dia tsy nihena aza ny taham-pahafatesana na dia teo aza ny vaksiny, ary ny tahan'ny otrikaretina dia mitohy amin'ny antonony, Hawaii dia manaraka fironana nasionaly amin'ny tsy fijerena ireo isa ireo mba hamerenana ny orinasa.
Hawaii Ny governora David Ige androany dia nanatevin-daharana ny Ben'ny tanànan'i Hawaii tamin'ny fanambarana ny fanafoanana ny fameperana maro amin'ny areti-mifindra tamin'ny 1 Desambra, izay midika fa misokatra ho an'ny orinasa indray i Hawaii.
Ny ben'ny tanànan'ny Nosy dia afaka mametraka ny fitsipika vonjy maika ho azy ireo nefa tsy mila fankatoavana mialoha avy amin'ny Governemanta
Hijanona ireto fepetra fiarovana manaraka ireto.
Ny Programa Safe Travels Hawaiʻi, mitaky fitsapana ho an'ireo mpandeha tsy vita vaksiny.
Ny mandat saron-tava anatiny;
Ny fepetra takian'ny vakisiny na fitsapana ho an'ny mpiasam-panjakana sy mpiasan'ny kaominina; SY
Ny fepetra takian'ny vaksiny na fitsapana ho an'ny mpiantoka sy mpitsidika amin'ny tranom-panjakana.
"Ireo dingana ireo dia manampy amin'ny famelomana indray ny indostrian'ny mpitsidika antsika amin'ny fotoana mety, miaraka amin'ny tahan'ny vaksiny ao amin'ny fanjakana misy antsika eo amin'ny laharana ambony indrindra eto amin'ny firenena, miaraka amin'ny fiarovana ara-pahasalamana ho an'ireo mpandeha an-trano izay takian'ny programa Safe Travels any Hawaii. Ny fameperana federaly novaina amin'ny fahatongavana iraisam-pirenena sy ny fitohizan'ny baikon'ny saron-tava anatiny ao Hawaii dia manome fiarovana fanampiny, ”hoy ny filohan'ny Hawaii Tourism Authority (HTA) sady tompon'andraikitra ambony John De Fries.
Ho fanampin'ny fanambarana androany avy amin'ny Governemanta, ny ben'ny tanànan'i Honolulu Rick Blangiardi dia nanambara ny fanafoanana ny fetran'ny fahafaha-manao sy ny fitakiana fanalavirana ara-tsosialy ho an'ny hetsika any Oahu, fanalahidy hanohizana ny fivoriana sy fivoriambe ao amin'ny Hawaii Convention Center sy ny trano fandraisam-bahiny isan-karazany.